Fantaro US - nisongadina
Home » About Highlight » Fantaro US
Asongadino-Ny anarany Mangataha Loss-fisorohana.
niorina tany 1998, Highlight dia maneran-mpilalao ao amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana ny EAS Accessories sy ny fiarovana hafa vokatra anisan'izany ny fitiliana, Locks, sns. Ny vokatra dia ahitana tsipika EAS Products, toy ny AM / EM / RF rafitra, EAS Tags, malefaka etikety, CD / VCD / DVD / horonam-peo / sigara azo antoka kokoa, lanyards, detachers sy ny isan-karazany sy ny vokatra Accessories EAS People Counter. Mba hiantohana ny kalitao avo, dia manaraka ny fenitra ISO9001 sy hentitra indrindra ny vokatra dia nekena taona. Ny vokatra dia nivarotra sy nametraka ny am-polony-of-an'arivony fiarovana matihanina, from security mpivarotra, farany mpampiasa ny rafitra integrators. An-tapitrisany ny toeram-pivarotana lehibe, fivarotana, raharaham-barotra, trano famakiam-boky, ary ny olona rehetra eran-tany dia voaaron'ny fiarovana ny vokatra avy amin'ny Highlight Company sy ny Asongadino Teams manerana izao tontolo izao.
Taona maro izay no lasa, ary ankehitriny ny mitombo Highlight dia vonona hanitatra ny fiantraikany eo amin'ny tsena ny fiarovana lehibe sy tsara kokoa hanompo ny mpanjifa sy ny fiaraha-monina ao amin'ny tena itokisana anjara - niaro ny olona, tombony sy ny fananany amin'ny alalan'ny teknolojia.
Asongadino tena namana tonga soa avy amin'ny manerana izao tontolo izao ho avy mba hamangy ny birao sy ny orinasa. Ny fahalianana sy ny fanontaniana momba antsika sy ny vokatra dia samy tena sarobidy. Tsy andrintsika ny fanorenana ny fandraharahana maharitra fifandraisana momba anareo ao amin'ny hoavy tsy ho ela!